Ihe ị ga-ahụ ma mee na Gothenburg | Akụkọ Njem
Ihe ịhụ na-eme na Gothenburg
Susana Garcia | | Obodo, General, Okenye
Gothenburg, ma ọ bụ Gotebörg, dị ka a maara ya na mba ụwa, bụ obodo nwere nnukwu azụmahịa ọdịnala, n'ihi ọnọdụ ya dị ukwuu na ọdụ ụgbọ mmiri ya. Taa, ọ ka bụ obodo azụmahịa dị ezigbo mkpa, mana ọ bụkwa ebe ezumike dị mma iji nwee ọmarịcha obodo nwere ọtụtụ ntụrụndụ ọdịnala.
Nke a bụ a nnọọ omenala obodo ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ oghere maka ihe niile masịrị gị. Ngosi ihe mgbe ochie dị iche iche, ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ebe a na-eme ihe nkiri na ọbụna ogige ntụrụndụ bụ akụkụ nke ọmarịcha obodo a ebe ịgwụ ike agaghị ekwe omume. Rịba ama ihe ndị ahụ niile anyị nwere ike ịhụ na Gothenburg.
1 Ogige ntụrụndụ Liseberg
2 Eluigwe na ala
4 Ngosi ihe mgbe ochie na Gothenburg
5 Ogige ntụrụndụ na ubi nke Gothenburg
6 Ebe nchekwa ohuru nke vslvsborg Fästning
7 Addangbọ mmiri njem Paddan
Ogige ntụrụndụ Liseberg
Gothenburg bụ ezigbo obodo iji soro ụmụaka, ọ nwere nnukwu ntụrụndụ, dịka Ogige ntụrụndụ Liseberg. Ogige ntụrụndụ a bụ nke kasị ukwuu na Scandinavia. Ihe kacha mma mara amara bụ ndị na-agbagharị agbagharị, a na-akpọ Balder. Ọ bụ ebe jupụtara n’ihe ime, nwere ụlọ nri, ndị na-ese ihe nkiri na ebe nkiri dị iche iche. Na ekeresimesi ha nwere ọpụrụiche pụrụiche nke Christmas na ogige ahụ.
Eluigwe na Ala bụ ebe ọzọ iji soro ezinụlọ nwee anụrị, ọ bụ ya mere nke a ji bụrụ obodo kachasị mma iji soro ụmụaka soro njem, ebe ha nwere ọtụtụ ebe maka ha. Nke a bụ etiti raara nye sayensị, ịmụ banyere anụmanụ na ime nnwale, na osisi asaa dị iche iche. Enwekwara ihe ngosi na akwarium. Ya mere, oge ezumike ezinụlọ ga-echere gị.
Nke a bụ otu n'ime ebe ngosi kacha n'obodo. Aha gị pụtara "Chọọchị azụ", na enweghị mgbagha ọ bụ ebe a na-efe ofufe maka azụ na azụ kacha mma na Europe niile. Ọ bụ ebe a na-ahụ azụ anyị na-amaghị, na ịzụta ngwaahịa zuru oke. Ọ bụ ụlọ nke ndị ụka Goth dere n'ike mmụọ nsọ, n'ime ya anyị nwekwara ike iri nri na ụlọ oriri na ọ Gabrielụ Gabrielụ Gabriel, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ azụ kacha mma na nri azụ. Ọ dị mma maka ndị hụrụ gastronomy na nri kachasị atọ ụtọ na akụrụngwa dị elu.
Ngosi ihe mgbe ochie na Gothenburg
Gothenburg bụ obodo jupụtara na ebe ngosi ihe mgbe ochie iji nwee ọbịbịa ọdịnala na-enweghị atụ. The Röda Sten Art Center bụ ụlọ kpo oku mbụ gbanwere na oghere ọdịnala. Ọ na-egosi ihe ngosi na ihe ngosi, na ịnọ n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ọ nwere ọnọdụ dị mma. N'ime ime ụlọ oriri na ọ caụ caụ, ebe a na-akụ egwu na ebe a na-ere nri. Museumlọ ihe ngosi nka nke Omenala Worldwa bụ ebe iji nwee ọhụụ ụwa niile. N'ebe a, e nwere ihe osise, ihe omume na ihe ngosi nwa oge maka ezinụlọ dum. Gaghị echefu Museum of Natural History na Gothenburg, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ọnụ ọgụgụ ụmụ anụmanụ, ihe ngosi banyere nsogbu gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ndụ n'ime oke osimiri. Ọzọ nleta dị mkpa bụ Henlọ nka nka nke Gothenburg, nke nwere otu nnukwu mkpokọta dị oke mkpa ma dị mkpa na mpaghara ugwu Europe. O nwere ọtụtụ ọrụ nke nka Nordic, kamakwa ndị ama ama dịka Picasso, Rembrandt, Rubens ma ọ bụ Monet. Anyị nwekwara Röhsska Museum, ụlọ ngosi ihe nka nke ewepụtara maka ihe ịchọ mma, ejiji na imewe.
Ogige ntụrụndụ na ubi nke Gothenburg
Nke a bụkwa obodo nwere ike ịnya isi na ịnwe nnukwu oghere nke na-anọchi anya udo nke udo n’etiti obodo ahụ. Ogige botanical bụ otu kachasị ukwuu na ịma mma na Europe dum, nwere osisi sitere n'akụkụ ụwa niile. N'ime ugbo ahụ ị nwere ike ịhụ nnukwu griin haus, yana otu dị ka ụlọ ahịa na ebe a na-ere nri. The Slottsskogen bụ ihe ọzọ na oké ubi nke obodo, ebe ị pụrụ inwe obi ụtọ ezinụlọ picnic, na-eje ije n'okporo ụzọ ya ma ọ bụ na-enwe zoo, ebe e nwere ọbụna penguins na akàrà.
Ebe nchekwa ohuru nke vslvsborg Fästning
Ebe a e wusiri ike anọghị na obodo Gothenburg, kama ọ dị n'àgwàetiti nke enwere ike ịnweta obere ụgbọ mmiri. Ọ bụ obere agwaetiti, ma taa otu n'ime ebe ndị njem nleta na-eleta, ebe ọ bụ na echekwara ebe ewusiri ike na narị afọ nke iri na asaa nke ọma ma dị na gburugburu ebe obibi mara mma. N'agwaetiti ahụ ị nwere ike ịga ebe e wusiri ike na-ama akụkọ ihe mere eme ya, ma hụkwa ụlọ ọrụ aka dị na cell, ma ọ bụ nwee ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na agwaetiti ahụ.
Addangbọ mmiri njem Paddan
Otu n'ime ụzọ kachasị mma na nke mbụ iji mata obodo ahụ bụ mmiri, mmewere nke dị ezigbo mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ. Echiche kachasị mma bụ ịnụ ụtọ ịnya ịnyịnya na ụgbọ mmiri nlegharị anya nke paddan. Na ije ị na-aga n’okpuru akwa mmiri dị iche iche ma ị rute n’ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Nleta ahụ dị ihe dị ka nkeji 50.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ịhụ na-eme na Gothenburg
Ebe 5 kachasị mma iji hụ New York si n'elu